Homeसमाचारसुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको मूल्य घट्यो कतिमा कारोबार हुँदैछ हेर्नु’होस्
February 2, 2021 admin समाचार 6637
नेपाली बजा’रमा आज सुनको मूल्य यथावत छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आज पनि छा’पावाल सुन प्रतितोला ९२ हजार ६०० रूपैयाँ काय’म भएको छ ।
तेजाबी सुनको मूल्य आज पनि तोला_को ९२ हजार १०० कायम भएको छ । यस्तै, चाँदीको मूल्य भने आज घ’टेको छ । आज तोलामा २० रुपैयाँ घटेर १३ सय ८० रुपैयाँ कायम गरिएको म’हासंघले जनाएको छ । – खबरहबबाट
धेरै वर्ष भयो अझै त्यो बनि’सकेको छैन ?’, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तावित अन्तर्रा’ष्ट्रिय स्तरको मुलपानी मैदानबारे प्रश्न गरेका छन् ।मंगलबार खेलकुदसँग प्रधानमन्त्री का’र्यक्रम सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संरचना निर्मा’णका विषयहरुमा चासो राखेका हुन ।
प्रधानमन्त्री ओली अन्तरक्रि’यामार्फत आएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मुलपानी बारे आएको ज’वाफ दिएका हुन्। उनले मुलपानी मैदान छिट्टै बन्ने पनि बताए । सम्बोधनकै क्रममा ओलीले खे’लकुद क्षेत्रका लागि बजेट बढ्ने आश्वा’सन पनि दिए ।
कोरोनाका कार_णले यस आर्थिक वर्षमा बजेट घटेको उनले बताए । उनले भने, ‘सन् २०२१ भित्रै कोरोना लेखे_ट्छौं। पहिलेको भन्दा बजेट बढेर आउँछ।’प्रधानमन्त्री ओलीले खेलकुद क्षेत्रलाई अनु’त्पादक भन्न नमिल्ने बताए ।
‘खेलकुदले धान फला’उँदैन। आलु पनि फलाउँदैन। ज्याकेट नि सिलाउँदैन भनेर अनु’त्पादक भन्नुहुन्न,’ उनले भने,’ स्वर्ण पदकले पर क्यापिटा इनकम, जीडीपी बढाउँदैन तर आफ्नो हिसाबको उप’लब्धि दिन्छ। अनुत्पादक होइन ।’
लाहुरे श्रीमानलाई छोडेर भागेकी श्रीमती र श्रीमान एकै ठाउँमा भेट, धरधरी रोए श्रीमान (भिडियो सहित)
February 11, 2021 admin समाचार 6593
भिण्डीका फाइदा : चाउरीपना हटाउनेदेखि मुटुसम्बन्धी रोग नि’यन्त्रणसम्म
November 29, 2020 admin समाचार 9289
काठमाडौं- भिण्डी के हो ? सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । यो तरकारीका रुपमा सबैले प्र’योग गरेका हुन्छ । कतिपय मानिसलाई भिण्डी मन’परे पनि केहीले यसको तर’कारी मनपराउँदैनन् । तर यसको विशे’षता जान्ने र बुझ्नेले
March 1, 2021 admin समाचार 6036
मागेर समाज’सेवा हुँदैन समाज सेवा गर्नेले आफैले कमाए’को सम्पत्तीवाट गर्नुपर्छ भन्ने भनाई सार्वज’निक भएकै बेला नायिका एलिजा गौतमले कमाएरै समाजसेवा गर्ने घोष’णा गरेकी छन् । माझी बस्ती र क्रिकेट रंगशाला निर्मा’णमा भूमिका खेलेका नायीका श्वेता
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (242131)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (230024)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (229654)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (228032)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (226816)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (226399)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (194414)